China CNC ကြိတ်စက်မွေ့ရာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Dongguan FUYA METAL & Plastic Products Co. , Ltd.
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > CNC စက် > CNC ကြိတ်စက် > CNC ကြိတ်စက်
CNC စက်ကြိတ်စက်၏မျက်နှာပြင်ပုံသဏ္generallyာန်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်ဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းများ၊ ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဘုံကြိတ်စက်အော်ပရေတာများ။ cutter နှင့် workpiece အကြားဆွေမျိုးအနေအထားကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေပြီးထို့နောက်ရွေးချယ်ထားသောကြိတ်ခွဲနှုန်းနှင့်အတူ, workpiece ဖြတ်တောက်ခြင်းအပေါ်ရှုး, သင် workpiece ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံကို process နိုင်ပါတယ်။
CNC ကြိတ်စက် surface shape is generally composed of straight lines, arcs or other curves. Common milling machine operators according to the design requirements. Constantly changing the relative position between the cutter and the workpiece, and then with the selected milling speed, so that the cutter on the workpiece cutting, you can processavariety of different shapes of the workpiece.
1. CNC ကြိတ်စက် is on the basis of the development ofageneral milling machine automatic processing equipment, the two processing technology is basically the same, the structure is also some similar. CNC ကြိတ်စက်s are divided into two categories without and with the knife library. CNC ကြိတ်စက် with cutter base is also called machining center.
2. The size of the smaller lifting table CNC ကြိတ်စက်, the width of the table is more than 400mm, it is most suitable for the processing of small and medium-sized parts and complex shape surface profile milling task. Large specifications such as gantry type milling machine, table in 500-600mm above, used to solve the processing needs of large complex parts.
3. CNC ကြိတ်စက် processing
၎င်း၏ linear ရွေ့လျားသြဒီနိတ်၏ positioning တိကျမှန်ကန်မှုကို 0.04 / 300mm, ထပ်ခါထပ်ခါ positioning ကိုတိကျမှန်ကန်မှုကို 0.025mm ဖြစ်ပြီး, ကြိတ်တိကျစွာ 0.035mm ဖြစ်ပါတယ်။
Advantages of CNC ကြိတ်စက်
၁။ အစိတ်အပိုင်းများကိုအထူးသဖြင့်ရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ္shapeာန်နှင့်ပုံသဏ္ableာန်အစိတ်အပိုင်းများ၊ အခွံအစိတ်အပိုင်းများစသည်တို့ကဲ့သို့သောခက်ခဲရှုပ်ထွေးသောအရွယ်အစားထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အတူအစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်နိုင်ခြင်း၊
၃။ Clamping positioning တစ်ခုအပြီးတွင်လုပ်ငန်းစဉ်များစွာမှလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုလုပ်ဆောင်နိူင်သည်။
၄။ မြင့်မားသောလုပ်ဆောင်မှုတိကျမှု၊ တည်ငြိမ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအပြောင်းအလဲရှိသောအရည်အသွေး၊ NUMERICAL control device ၏သွေးခုန်နှုန်းနှင့်ညီမျှသည်မှာယေဘုယျအားဖြင့် 0.001mm ဖြစ်ပြီးမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်သော NUMERICAL control system သည် ၀.၁ မီတာအထိရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင် numerical control processing သည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုလည်းရှောင်ရှားသည်။ အော်ပရေတာအမှား၊
6, high production efficiency, CNC ကြိတ်စက် generally does not need to use special fixture and other special process equipment, in the replacement of the workpiece just need to call stored in the CNC machining program, clamping tools and tool data can be adjusted, thus greatly reducing the production cycle. Secondly, CNC ကြိတ်စက် with milling machine, boring machine, drilling machine functions, so that the process highly concentrated, greatly improve the production efficiency. In addition, CNC ကြိတ်စက် spindle speed and feed speed are continuously variable, so it is conducive to choose the best cutting parameters;
The size of the smaller lifting table CNC ကြိတ်စက်, the width of the table is more than 400mm, it is most suitable for the processing of small and medium-sized parts and complex shape surface profile milling task. Large specifications such as gantry type milling machine, table in 500-600mm above, used to solve the processing needs of large complex parts.
CNC ကြိတ်စက် processing part is the surface profile, according to the geometric shape of the surface should choose two coordinate linkage and three coordinate linkage system. Also according to the parts processing requirements, on the basis of the general CNC ကြိတ်စက်, increase the NUMERICAL control indexing head or CNC rotary table, the machine tool system for the four coordinates of the NUMERICAL control system, can be processed spiral groove, blade parts.
Hot Tags: CNC ကြိတ်စက်၊ တရုတ်၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ